​सांसद फेरिए तर देवीगाउँ जोड्ने सेउतीको पुल अझै अलपत्र
​सांसद फेरिए तर देवीगाउँ जोड्ने सेउतीको पुल अझै अलपत्र
बिहीबार २६, पुष २०७५
धरान । ३ वर्षमा सम्पन्न गरिसक्ने लक्ष्य सहित निर्माण थालिएको धरान १५ निराजन बस्ती र धरान ४ नं. वडालाई जोड्ने सेउती पुलमा ठडिएको ३ वटा पिल्लर जीर्ण बन्दै गएको छ । राष्ट्रिय योजनामा पारेर पुल सम्पन्न गर्ने लक्ष्य सहित निर्माण कार्य शुरु भएको थियो । तर ५ वर्ष बित्न लाग्दा पनि न त पुलको काम नै अघि बढयो, न त राष्ट्रिय योजनामै पर्न सक्यो ।
दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन देखि नै प्रत्येक राजनितिक पार्टीको घोष्णापत्रमा नारा बनेको धरान १५ र ४ नम्बर वडालाई जोड्ने सेउती खोलाको पुल ५ वर्ष देखि अलपत्र बनेको छ । राजनितिक पार्टीले गरेको प्रतिबद्धता पुरा गर्न नसक्दा ३ वर्ष अघि बनेको ३ वटा पिल्लर पनि जीर्ण बन्दै गएको छ । राष्ट्रिय योजनामा पारेर पुल निर्माण सम्पन्न गर्ने राजनितिक आश्वासनमा स्थानीयले ऋण काढेर पुल निर्माणको काम शुरु गरेका थिए । तत्कालीन सभासदको निर्वाचन क्षेत्र कोषको केही रकम र स्थानीयले ऋण काढेर ३ वटा पिल्लर निर्माण भएको थियो ।
४ करोड ५० लाख रुपैयाको कुल लागतमा निर्माण शुरु भएको पुल ५० मिटर लम्बाई, ७ मिटर चौडाईमा ३ वटा पिल्लर लगाई पुल निर्माण गरिसक्ने योजना रहेको थियो । पुलको शिलान्यास तत्कालिन सुनसरी क्षेत्र नं. १ का संभासद मिन विश्वकर्माले गरेका थिए । स्थानीयको जनसहभागिता र जिल्ला विकाश समितीको ४७ लाख रुपैया सहयोगमा पिल्लर ठडिएको ५ वर्ष बितिसकेको छ अहिले पिल्लर पनि जीर्ण बन्दै गएको वडा नम्बर ४ का वडा सदस्य धन बहादुर कुलुङ बताउँछन् । उनले भने, ‘राजनितिक पार्टीले चुनाव जित्नका लागि नारा मात्रै बनायो, अहिले सम्म पनि आश्वासन मात्रै छ, रातो किताबमा परेको छ भन्छन्, तर ३ वर्ष देखि कुनै बजेट आएको छैन् ।’
काठे पुलको साटो अब बनिने पक्की पुलबाट वडा नंं ४, र ५ को उत्तरी क्षेत्रका खैरेनी टार, बसन्तटार, पत्रङबारी, देवी गाउँ, निशान डाँडा, हरिया लगायतका धनकुटाका केही क्षेत्रका स्थानीयहरु लाभन्वित हुने छन् । धरान देखि धनकुटा सम्म जोड्ने सक्ने सेउती पुलका लागि राज्यले राष्ट्रिय योजनामै उल्लेख गरि पुल निर्माण सम्पन्न गर्न आवश्यक रहेको स्थानीयको भनाई छ ।
स्थानियले २०६३ सालमा विकल्पको रुपमा काठे पुल निर्माण गरेका थिए । स्थानियवासी र पत्रङबारी सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहको लगानीमा पुल निर्माण भएको थियो । सोही काठे पुल पनि २०६९ सालमा आएको बाढीले क्षति पु¥याए पछि उनीहरुले आवात जावतमा समस्या भोग्दै आएका थिए । खोलामा पक्की पुल बनेपछि सहज आवागमनले बजार वृद्धि हुने स्थानियको अपेक्षा रहेको छ ।
पुल बन्ने भन्दै स्थानीयले ऋण काढेरै भए पनि पुलको काम शुरु गरेका थिए । दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन देखि नै राजनितिक दलको घोषणापत्रमा समावेश भएको सेउतीखोलाको पुल स्थानीय निर्वाचन, प्रदेश र संघीय निर्वाचनमा पनि हटेन तर जनता अझै राज्यले पुल बनाईदिन्छ भन्ने आशामा छन् ।